မဟူရာကျောက်အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Thutazone
By ThutammPosted on September 3, 2018 September 3, 2018
မဟူရာသည် ကျစ်လျစ်မာကြောသော ကျောက်သလင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကျောက်ခေါင်းများ ထဲရှိ သဲစင်ထပ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။ မဟူရာကျောက်သည် သံမဏိထက် အနည်းငယ် မာသော်လည်း သံမဏိထက် ပိုဆတ်သည်။ မဟူရာသည် အရောင်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် အစင်းများထင်လျက် ရှိသည့်ပြင် သွေးလိုက် သည့်အခါ အလွန်အရောင် တောက်ပြောင်လာနိုင်သည်။ မဟူရာသည် အမည်းရောင်ဟု အများစုသိကြသော်လည်း မဟူရာကျောက်တိုင်းတော့ အမည်းရောင်မဟုတ်။ အချို့မဟူရာ ကျောက်များသည် အစင်းများဖြစ်၍ အချို့ကား လုံးချင်း မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာရောင်၊ သို့ မဟုတ် အမည်းရောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ အချို့ မဟူရာ ကျောက်များကို ယင်းတို့တွင် ပေါ်ထွက်နေသော အရောင်ကို လိုက်၍ အမည်အမျိုးမျိုး ပေးကြသည်။
မဟူရာကျောက် ဒဏ္ဍာရီ နှင့် သမိုင်း
ဒဏ္ဍာရီများတွင် မာကျူရီ (Mercury) အမည်ရှိ နတ်သားမှ လူသားတို့အား လက်ဆောင်အဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကြဲဖြန့်ခဲ့သော ကျောက်မျက် ရတနာဖြစ်သည်။(ရိုမန်တွင် မာကျူရီဟုခေါ်ပြီး ဂရိတွင်မှု Hermes ဟုခေါ်သည်) မာကျူရီ နတ်သားကို ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုလ် နတ်သားဟူ၍ ဆိုသည်။ နတ်ဒေဝတာတို့၏ စေတမန် နတ်သားဟု လည်း ဆိုသည်။ ဉာဏ်ပညာ ထက်မြက်သည်။ အစွမ်းအစ ကြီးမားသည်။ စွန့်စား သွားလာသူများ၊ ကုန်သည် စီးပွားရေး သမားများကို စောင့်ရှောက်သော နတ်သား ဖြစ်သည်။
မြွေစသော အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါတို့အား နှိမ်နင်းသည်။ အသိဉာဏ် ပညာ ဖြန့်ချိပေးသည်။ သင်ကြားပေးသည်။ စာပေရေးသားမှု၊ အတွက်ချက်မှု၊ ဆေးဝါးကုသမှုနှင့် တကွ အလွန် ထက်မြက်သည့် ဂမ္ဘီရ အတတ် ပညာကို လူသားတို့အား ဖြန့်ချိ သင်ကြားပေးသည်ဟူ၍ ဆို၏။ ဤနတ်ဘုရားသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပွား အဖြစ် မဟူရာ ကျောက်ကို ဖန်ဆင်းသည်။ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် တန်ခိုး စွမ်းအင်တို့ကို မဟူရာ ကျောက်တွင် ထုံကူးစေသည်။ ထို့နောက် ကမ္ဘာမြေ အနှံ့ ကြဲဖြန့်၍ ထိုက်သူတို့ကို ရရှိစေသည်ဟု ဆို၏။
ရှေးသရော အခါကShaman ဟူသော အမည်ခံယူသည့် နတ်ဆရာများသည် ထူးခြားသော ဂမ္ဘီရ အတတ်များ၊ ဆေးဝါး ကုသခြင်းများ တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်သည်။ နတ်ဒေဝတာ တို့နှင့်လည်း ဆက်နွယ်မှု ရှိသည်။ ဆေးဝါးကုသခြင်း၊ ရှေ့ဖြစ်ဟောပြောခြင်း၊ မကောင်းဆိုးဝါးများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် လူ့လောကတွင် လှည့်လည် သွားလာနေသည်။ ၎င်းတို့ထံတွင် အမြဲဆောင်လေ့ရှိသော ကျောက်သည်ကား မဟူရာ ကျောက်ပင်ဖြစ်၏။ ၎င်းကျောက်ဖြင့် အနာရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ကုသည်။ မြွေ၊ ကင်း စသော သတ္တဝါများ၏ အဆိပ်ဘေးရန်မှ ပြေပျောက်စေ၏။ အထူးသဖြင့် အနောက် ဥရောပနိုင်ငံများ၏ ဒဏ္ဍာရီအသီးသီးတွင် Alaska တွင် Shaman များ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဂမ္ဘီရ လောကတွင် ထိပ်တန်းနေရာမှ လွှမ်းမိုးထားသည့် ၁၅ ရာစု အဆုံးပိုင်းမှ ပညာရှင်ကြီး Agippa ၏ အဆို အမိန့်တွင်ကား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် နေထွက်ချိန်တွင် မဟူရာ ကျောက်စိမ်ထားသည့် ရေဝင်ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသော စွမ်းပကားများ တိုးပွားနိုင်သည်။ ထူးခြားသည့် ကံကောင်းခြင်းများ ရရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယနေ့ထက်တိုင် အနောက်တိုင်းမှ ဂမ္ဘီရ ပညာရှင် တိုင်းသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်တိုင်းတွင် မဟူရာ ကျောက်ကို ရေစိမ်၍ သောက်သုံးကြသည်ဟု Agippa ကပင်ဆိုပြန်သည်။
ထွက်ရှိသောနေရာများ နှင့် မဟူရာအမျိုးအစားများ
မဟူရာကျောက်များကို များသောအားဖြင့် တောင် အမေရိကတိုက် ဘရာဇီးနိုင်ငံနှင့် ဥရုဂွေးနိုင်ငံတို့ရှိ ကျောက်ကျင်းများမှ တူးဖော်ရရှိကြသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အိုင်ဒါ-အိုဗာစတိုင်းခရိုင်သည် နှစ်ရာပေါင်းများစွာကပင် မဟူရာကျောက်သွေးခြင်းနှင့် အရောင်တင်ခြင်း ပြုလုပ်ရာဌာန ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်အလုပ်သမားများသည် မဟူရာကျောက်အရောင်ဆိုနည်း အမျိုးမျိုးကို တိုးတက် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ရာ ယခုအခါ အမျိုးသမီးများ ဝတ်ဆင်သော မဟူရာကျောက်များကို ကြိုက်ရာအရောင်ရအောင် ဆိုးယူကြ သည်။ အချို့ မဟူရာကျောက်များကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်တွင် တူးဖော်ရရှိ၍ ပို့တလန်မြို့တွင် ကျောက်သွေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
မဟူရာကို ဆံထိုး၊ ရင်ထိုး၊ စက္ကူဖြတ်ဓား၊ မင်အိုးတင်ခုံနှင့် တံဆိပ်များ ပြုလုပ်ရာ၌ အများအပြား အသုံးပြုကြသည်။ မဟူရာကျောက်သည် မာသည့်ပြင် အက်ဆစ် မစားနိုင်သောကြောင့် ဓာတ်ပစ္စည်းများ ထောင်းရန်နှင့် ရောစပ် ရန်အတွက် ဆုံနှင့် ကျည်ပွေ့များ ပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုကြ လေသည်။
မဟူရာ အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် မဟူရာဖြူသည်လည်း ကျောက်သလင်းမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ အာရှမိုင်းနာ ဒေသ၊ ဗီသင်းနီးယားနယ်၊ ကယ်လဆီဒွန်မြို့အနီးတွင် မဟူရာဖြူ ကျောက်ကျင်းတစ်ခု ရှိသည်။ အခြားမဟူရာဖြူ ကျောက်ကျင်း များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် နှင့် ကော်လိုရားဒို ပြည်နယ်များ၊ အိုက်စလန်ကျွန်းနှင့် ဗြိတိန် နိုင်ငံ စကော့တလန်ပြည်တို့တွင် တွေ့ရသည်။
မဟူရာဖြူသည် ဟိုဘက် သည်ဘက် တိုးရိုပေါက် မမြင်နိုင်သော်လည်း မြင်နိုင်လုနီးပါးမှ ကြည်လင်၍ အဝိုင်း စက်ကလေးများ မှုန်မှုန်ပါရှိသည်။ အချို့မဟူရာဖြူများတွင် လှပသော အရောင်အစက်ကလေးများ ပါရှိသည်။ မဟူရာညိုသည်လည်း ကျောက်သလင်းမျိုးဖြစ်၍ လက်စွပ်နှင့် အခြားဆင်မြန်းရန် ဝတ်စားတန်ဆာများတွင် ထည့်၍ ဆင်ယင်ကြသည်။
မဟူရာညိုကို အိန္ဒိယ၊ ပယ်လက်စတိုင်၊ အာရေဗျ၊ ဘရာဇီး၊ ဥရုဂွေး၊ စကော့ တလန်နှင့် အယ်ယာနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသည်။ ယင်းသည် ကျောက်မျက်ရတနာများတွင် အပေါဆုံး ရတနာ တစ်ခုဖြစ်၍ သွေးရာ၌ အပြားလိုက်သွေးတတ်ကြသည်။ အခုံး၊ အခွက် ဖြစ်အောင်လည်း သွေးကြသည်။
မဟူရာနီသည်လည်း ကျောက်သလင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တောင်အမေရိကတိုက်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ များရှိ ကျောက်ကျင်းများမှ တူးဖော်ရရှိသည်။ လက်စွပ် လက်ကောက်များတွင် ထည့်၍ ဆင်ယင်ကြသည်။ မဟူရာနီ ကို တစ်ခါတစ်ရံ အဝါ၊ အညို၊ သို့မဟုတ် အဖြူရောင် ဖြစ်အောင်ဆိုး၍ အသုံးပြုကြသည်။ ရှေးလူများသည် မဟူရာနီကို လက်နက်နှင့် ပယောဂဘေးမှ အကာအကွယ် ပေးသော အဆောင်အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
မဟူရာ ကျောက်သည် လူသားတို့တွင် ကျရောက်သည့် မကောင်းသော အညံ့အဆိုးများကို ပျက်ပြယ်စေ သည်။ စိတ်ညစ်၊ စိတ်ရှုပ်၊ စိတ်ဓာတ် ကျနေသူများ၊ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသော အခက်အခဲ၊ အနှောင့် အယှက်များနှင့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရသောအခါများတွင် မဟူရာ ကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ဆောင်ယူခြင်းဖြင့် တစ်စုံတစ်ရသော စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ဆိုသည်။
ရှေးကာလမှသည် ယခုထက်တိုင် မဟူရာကျောက်သည် လူသားတို့ကို ဒုက္ခပေးတတ်သည့် အန္တရာယ်ဆိုး၊ ဘေးဆိုးများကို ဖက်ရှား နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဝတ်ဆင် ဆောင်ယူထားသူ အပေါ်တွင် ကျရောက်စေမည့် ဒုက္ခ အန္တရာယ်တို့ကို တိုက်ပွဲဝင်ပြီး ကာကွယ်ပေးသည်။ ဝိညာဉ်ဆိုးများ ပူးကပ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေသည်ဟု ဆိုသည်။
မဟူရာ ကျောက်သည် လူသားတို့အား အောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် ဟု ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဂမ္ဘီရ ပညာရှင် အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ်ထားသည်။ Agate is the stone which produce Victory and Wealth ဟူ၍ ကျမ်းဂန်များတွင် ရေးသားထားသည်။ ရှေးခေတ်ကာလမှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်းများ၊ သူတော်စင်များသည် မဟူရာ ကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ခြင်း ပြုသည်။ ငြိမ်းချမ်းခြင်း (Pcace) နှင့် စိုးမိုးနိုင်ခြင်း (Power) ကို ရရှိနိုင်သော ကျောက်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ လျှို့ဝှက်မှုအပြည့် လွှမ်းမိုးနေသော ကျောက်မျက် ရတနာဟု ဆိုသည်။ ရသင့်ရထိုက်သူ၊ ပိုင်ဆိုင်သင့်သူကိုမှ ပိုင်ဆိုင်စေသည်ဟုလည်း ဆိုပြန်သည်။
မဟူရာ အမည်းနှင့် မဟူရာ အဖြူဟူ၍ နှစ်မျိုးကို တွဲစပ်၍ ရွှေနှင့် ကွင်းကာ ဝတ်ဆင်က ထူးထူးခြားခြား စီးပွားတိုးတက်ခြင်း၊ အလိုရှိရာ ပြည့်ဝ အဆင်ပြေစေခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသည်ဟု အဆိုရှိသည်။ အဖြူရောင် မဟူရာသည် ရှေ့ရေး အား ကြိုတင် သိစေခြင်း။ မကောင်းသော ဘေးဆိုးတို့ကို ဖက်ရှားခြင်း၊ အနက်ရောင် မဟူရာသည် အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းနှင့် နက်နဲသော အတတ်ပညာ ထက်မြက်သော ဉာဏ်စွမ်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိပေရာ ၎င်း နှစ်မျိုး တွဲစပ် ဝတ်ဆင်ခြင်းသည် အလွန် ထူးခြားခြင်းကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။
မဟူရာကျောက်ကို ဝတ်ဆင်သောအခါ နားကပ်၊ ဆွဲကြိုး၊ လက်ကောက်၊ ရင်ထိုးတို့အဖြစ် ဝတ်ဆင်က မည်သို့ ဝတ်ဆင်ရမည် ဟူသော ဥပဒေသမရှိ၊ နှစ်သက်လို ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ လက်စွပ်အဖြစ် ဝတ်ဆင်က အမျိုးသားတို့သည် လက်ညှိုးတွင်သာ ဝတ်ရမည်။ ဘယ်၊ ညာနှစ်ဖက် နှစ်သက်ရာရွေး၍ ဝတ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် လက်သန်းတွင်သာ ဝတ်ရမည်။ မဟူရာကျောက်ကို အခြားသော ကျောက်များနှင့် စီခြယ်၍ ဝတ်ရန် မသင့်။ သီးသန့် ရွေးချယ် ဝတ်သင့်သည်။ မဟူရာကျောက်ကို လက်စွပ်အဖြစ် ဝတ်ဆင်က မိမိလက်သန်း၏ လက်သည်းခွံ ထက်ကြီးသော အရွယ်အစားကို ရွှေနှင့် ကွင်း၍ ဝတ်ရမည်။
အစိမ်းရောင် အဝတ်အစားနှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်က လာဘ်လာဘ ရွှင်ပျမည်။ ငွေကြေး ကံကောင်းမည်၊ ဥစ္စာဓန တိုးပွားမည် ဟုဆိုသည်။
အညိုရောင် အဝတ်အစား နှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်က လုပ်သမျှ အလုံးစုံအောင်မြင်မည်။ ထက်မြက်စွာအစွမ်းပြနိုင်ပြီး အလိုရှိရာ ပြည့်စုံမည်။
အပြာရောင် အဝတ်အထည်ဝ တ်ဆင်က စန်းပွင့်ခြင်း၊ ပီယဓာတ် ကောင်းခြင်း၊ လူချစ်လူခင် ပေါများခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ ရရှိစေမည်။
အနီရောင်နှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်က ပြောရေးဆိုရေးတို့တွင် အမိန့်သြဇာ တည်မြဲခြင်း၊ ရန်အတိုက် အခံတို့အား ဖက်ရှား နိုင်ခြင်းရှိမည်။
အနက်ရောင် ဝတ်ဆင်က အများအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိမည်။ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိမည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် မဟူရာ ကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် သာမန် အကျိုးဆက်ကောင်း ရှိစေခြင်းအပြင် မိမိဆင် ယင်သော အဝတ်အထည်များ၏ အရောင်အသွေးအလိုက် ထူးခြားသော စွမ်းပကား များကိုပါ ရရှိနိုင်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ ၈ နှင့်
ဆရာစံ-ဇာဏီဘို၏ ကျောက်မျက်ရတနာကို ဘယ်လို ဆင်မြန်းမလဲ…. စာအုပ်မှကောက်နုတ်သည်။
မဟူရာကြောကျအကွောငျး သိကောငျးစရာ (unicode)
မဟူရာသညျ ကဈြလဈြမာကွောသော ကြောကျသလငျးမြိုး ဖွဈသညျ။ ယငျးသညျ ကြောကျခေါငျးမြား ထဲရှိ သဲစငျထပျမြားတှငျ ဖွဈပျေါလြှကျရှိသညျ။ မဟူရာကြောကျသညျ သံမဏိထကျ အနညျးငယျ မာသျောလညျး သံမဏိထကျ ပိုဆတျသညျ။ မဟူရာသညျ အရောငျအမြိုးမြိုးတို့ဖွငျ့ အစငျးမြားထငျလကျြ ရှိသညျ့ပွငျ သှေးလိုကျ သညျ့အခါ အလှနျအရောငျ တောကျပွောငျလာနိုငျသညျ။ မဟူရာသညျ အမညျးရောငျဟု အမြားစုသိကွသျောလညျး မဟူရာကြောကျတိုငျးတော့ အမညျးရောငျမဟုတျ။ အခြို့မဟူရာ ကြောကျမြားသညျ အစငျးမြားဖွဈ၍ အခြို့ကား လုံးခငျြး မီးခိုးရောငျ၊ အညိုရောငျ၊ အဝါရောငျ၊ အပွာရောငျ၊ သို့ မဟုတျ အမညျးရောငျမြား ဖွဈကွသညျ။ အခြို့ မဟူရာ ကြောကျမြားကို ယငျးတို့တှငျ ပျေါထှကျနသေော အရောငျကို လိုကျ၍ အမညျအမြိုးမြိုး ပေးကွသညျ။
မဟူရာကြောကျ ဒဏ်ဍာရီ နှငျ့ သမိုငျး
ဒဏ်ဍာရီမြားတှငျ မာကြူရီ (Mercury) အမညျရှိ နတျသားမှ လူသားတို့အား လကျဆောငျအဖွဈ ကမ်ဘာတဈဝနျး ကွဲဖွနျ့ခဲ့သော ကြောကျမကျြ ရတနာဖွဈသညျ။ (ရိုမနျတှငျ မာကြူရီဟုချေါပွီး ဂရိတှငျမှု Hermes ဟုချေါသညျ)မာကြူရီ နတျသားကို ဗုဒ်ဓဟူး ဂွိုလျ နတျသားဟူ၍ ဆိုသညျ။ နတျဒဝေတာတို့၏ စတေမနျ နတျသားဟု လညျး ဆိုသညျ။ ဉာဏျပညာ ထကျမွကျသညျ။ အစှမျးအစ ကွီးမားသညျ။ စှနျ့စား သှားလာသူမြား၊ ကုနျသညျ စီးပှားရေး သမားမြားကို စောငျ့ရှောကျသော နတျသား ဖွဈသညျ။ မွှစေသော အဆိပျရှိ သတ်တဝါတို့အား နှိမျနငျးသညျ။ အသိဉာဏျ ပညာ ဖွနျ့ခြိပေးသညျ။ သငျကွားပေးသညျ။ စာပရေေးသားမှု၊ အတှကျခကျြမှု၊ ဆေးဝါးကုသမှုနှငျ့ တကှ အလှနျ ထကျမွကျသညျ့ ဂမ်ဘီရ အတတျ ပညာကို လူသားတို့အား ဖွနျ့ခြိ သငျကွားပေးသညျဟူ၍ ဆို၏။ ဤနတျဘုရားညျ ၎င်းငျး၏ ကိုယျပှား အဖွဈ မဟူရာ ကြောကျကို ဖနျဆငျးသညျ။ ပိုငျဆိုငျထားသညျ့ တနျခိုး စှမျးအငျတို့ကို မဟူရာ ကြောကျတှငျ ထုံကူးစသေညျ။ ထို့နောကျ ကမ်ဘာမွေ အနှံ့ ကွဲဖွနျ့၍ ထိုကျသူတို့ကို ရရှိစသေညျဟု ဆို၏။
ရှေးသရော အခါကShaman ဟူသော အမညျခံယူသညျ့ နတျဆရာမြားသညျ ထူးခွားသော ဂမ်ဘီရ အတတျမြား၊ ဆေးဝါး ကုသခွငျးမြား တတျမွောကျ ကြှမျးကငျြသညျ။ နတျဒဝေတာ တို့နှငျ့လညျး ဆကျနှယျမှု ရှိသညျ။ ဆေးဝါးကုသခွငျး၊ ရှဖွေ့ဈဟောပွောခွငျး၊ မကောငျးဆိုးဝါးမြားကို ဖယျရှားပေးခွငျးဖွငျ့ လူ့လောကတှငျ လှညျ့လညျ သှားလာနသေညျ။ ၎င်းငျးတို့ထံတှငျ အမွဲဆောငျလရှေိ့သော ကြောကျသညျကား မဟူရာ ကြောကျပငျဖွဈ၏။ ၎င်းငျးကြောကျဖွငျ့ အနာရောဂါ အမြိုးမြိုးကို ကုသညျ။ မွှေ၊ ကငျး စသော သတ်တဝါမြား၏ အဆိပျဘေးရနျမှ ပွပြေောကျစေ၏။ အထူးသဖွငျ့ အနောကျ ဥရောပနိုငျငံမြား၏ ဒဏ်ဍရီအသီးသီးတှငျ Alaska တှငျ Shaman မြား ရှိနဆေဲဖွဈသညျ။
ဂမ်ဘီရ လောကတှငျ ထိပျတနျးနရောမှ လှမျးမိုးထားသညျ့ ၁၅ ရာစုအဆုံးပျိုငျးမှ ပညာရှငျကွီး Agippa ၏ အဆို အမိနျ့တှငျကား ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နံနကျ နထှေကျခြိနျတှငျ မဟူရာ ကြောကျစိမျထားသညျ့ ရဝေငျကို သောကျသုံးခွငျးဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျရှိသော စှမျးပကားမြား တိုးပှားနိုငျသညျ။ ထူးခွားသညျ့ ကံကောငျးခွငျးမြား ရရှိနိုငျသညျဟု ဆိုသညျ။ ယနထေ့ကျတိုငျ အနောကျတိုငျးမှ ဂမ်ဘီရ ပညာရှငျ တိုငျးသညျ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နံနကျတိုငျးတှငျ မဟူရာ ကြောကျကို ရစေိမျ၍ သောကျသုံးကွသညျဟု Agippa ကပငျဆိုပွနျသညျ။
ထှကျရှိသောနရောမြား နှငျ့ မဟူရာအမြိုးအစားမြား
မဟူရာကြောကျမြားကို မြားသောအားဖွငျ့ တောငျ အမရေိကတိုကျ ဘရာဇီးနိုငျငံနှငျ့ ဥရုဂှေးနိုငျငံတို့ရှိ ကြောကျကငျြးမြားမှ တူးဖျောရရှိကွသညျ။ ဂြာမနီနိုငျငံရှိ အိုငျဒါ-အိုဗာစတိုငျးခရိုငျသညျ နှဈရာပေါငျးမြားစှာကပငျ မဟူရာကြောကျသှေးခွငျးနှငျ့ အရောငျတငျခွငျး ပွုလုပျရာဌာန ကွီးတဈခု ဖွဈခဲ့သညျ။ ဂြာမနျအလုပျသမားမြားသညျ မဟူရာကြောကျအရောငျဆိုနညျး အမြိုးမြိုးကို တိုးတကျ လုပျကိုငျလာခဲ့ရာ ယခုအခါ အမြိုးသမီးမြား ဝတျဆငျသော မဟူရာကြောကျမြားကို ကွိုကျရာအရောငျရအောငျ ဆိုးယူကွ သညျ။ အခြို့ မဟူရာကြောကျမြားကို အမရေိကနျ ပွညျထောငျစု၊ အျောရီဂှနျပွညျနယျတှငျ တူးဖျောရရှိ၍ ပို့တလနျမွို့တှငျ ကြောကျသှေးလုပျငနျးကို လုပျကိုငျကွသညျ။
မဟူရာဖွူသညျ ဟိုဘကျ သညျဘကျ တိုးရိုပေါကျ မမွငျနိုငျသျောလညျး မွငျနိုငျလုနီးပါးမှ ကွညျလငျ၍ အဝိုငျး စကျကလေးမြား မှုနျမှုနျပါရှိသညျ။ အခြို့မဟူရာဖွူမြားတှငျ လှပသော အရောငျအစကျကလေးမြား ပါရှိသညျ။ မဟူရာညိုသညျလညျး ကြောကျသလငျးမြိုးဖွဈ၍ လကျစှပျနှငျ့ အခွားဆငျမွနျးရနျ ဝတျစားတနျဆာမြားတှငျ ထညျ့၍ ဆငျယငျကွသညျ။ မဟူရာညိုကို အိန်ဒိယ၊ ပယျလကျစတိုငျ၊ အာရဗြေ၊ ဘရာဇီး၊ ဥရုဂှေး၊ စကော့ တလနျနှငျ့ အယျယာနိုငျငံမြားတှငျ တှရေ့သညျ။ ယငျးသညျ ကြောကျမကျြရတနာမြားတှငျ အပေါဆုံး ရတနာ တဈခုဖွဈ၍ သှေးရာ၌ အပွားလိုကျသှေးတတျကွသညျ။ အခုံး၊ အခှကျ ဖွဈအောငျလညျး သှေးကွသညျ။
မဟူရာ ကြောကျသညျ လူသားတို့တှငျ ကရြောကျသညျ့ မကောငျးသော အညံ့အဆိုးမြားကို ပကျြပွယျစေ သညျ။ စိတျညဈ၊ စိတျရှုပျ၊ စိတျဓာတျ ကနြသေူမြား၊ အမြိုးမြိုးအဖုံဖုံသော အခကျအခဲ၊ အနှောငျ့ အယှကျမြားနှငျ့ ထိပျတိုကျ ရငျဆိုငျရသောအခါမြားတှငျ မဟူရာ ကြောကျကို ဝတျဆငျခွငျး၊ ဆောငျယူခွငျးဖွငျ့ တဈစုံတဈရသော စိတျအေးခမျြးသာမှုကို ဖွဈပျေါစသေညျဟု ဆိုသညျ။
ရှေးကာလမှသညျ ယခုထကျတိုငျ မဟူရာကြောကျသညျ လူသားတို့ကို ဒုက်ခပေးတတျသညျ့ အန်တရာယျဆိုး၊ ဘေးဆိုးမြားကို ဖကျရှား နိုငျစှမျးရှိသညျ။ ဝတျဆငျ ဆောငျယူထားသူ အပျေါတှငျ ကရြောကျစမေညျ့ ဒုက်ခ အန်တရာယျတို့ကို တိုကျပှဲဝငျပွီး ကာကှယျပေးသညျ။ ဝိညာဉျဆိုးမြား ပူးကပျခွငျးမှ ကငျးဝေးစသေညျဟု ဆိုသညျ။
မဟူရာ ကြောကျသညျ လူသားတို့အား အောငျနိုငျခွငျးနှငျ့ ကွီးပှားတိုးတကျခွငျးတို့ကို ဖွဈပျေါစသေညျ ဟု ကမ်ဘာတဈဝနျးမှ ဂမ်ဘီရ ပညာရှငျ အားလုံးက တညီတညှတျတညျး သတျမှတျထားသညျ။ Agate is the stone which produce Victory and Wealth ဟူ၍ ကမျြးဂနျမြားတှငျ ရေးသားထားသညျ။ ရှေးခတျေကာလမှ ဘာသာရေး ခေါငျးဆောငျးမြား၊ သူတျောစငျမြားသညျ မဟူရာ ကြောကျကို ဝတျဆငျခွငျး ပွုသညျ။ ငွိမျးခမျြးခွငျး (Pcace) နှငျ့ စိုးမိုးနိုငျခွငျး (Power) ကို ရရှိနိုငျသော ကြောကျဟူ၍ သတျမှတျထားသညျ။ လြှို့ဝှကျမှုအပွညျ့ လှမျးမိုးနသေော ကြောကျမကျြ ရတနာဟု ဆိုသညျ။ ရသငျ့ရထိုကျသူ၊ ပိုငျဆိုငျသငျ့သူကိုမှ ပိုငျဆိုငျစသေညျဟုလညျး ဆိုပွနျသညျ။
မဟူရာ အမညျးနှငျ့ မဟူရာ အဖွူအရောငျနှဈမြိုးကို တှဲစပျ၍ ရှနှေငျ့ ကှငျးကာ ဝတျဆငျက ထူးထူးခွားခွား စီးပှားတိုးတကျခွငျး၊ အလိုရှိရာ ပွညျ့ဝ အဆငျပွစေခွေငျးနှငျ့ ပွညျ့စုံသညျဟု အဆိုရှိသညျ။ အဖွူရောငျ မဟူရာသညျ ရှရေ့ေး အား ကွိုတငျ သိစခွေငျး။ မကောငျးသော ဘေးဆိုးတို့ကို ဖကျရှားခွငျး၊ အနကျရောငျ မဟူရာသညျ အောငျမွငျကွီးပှားခွငျးနှငျ့ နကျနဲသော အတတျပညာ ထကျမွကျသော ဉာဏျစှမျးအားကို ဖွဈပျေါစခွေငျးရှိပရော ၎င်းငျး နှဈမြိုး တှဲစပျ ဝတျဆငျခွငျးသညျ အလှနျ ထူးခွားခွငျးကို ဖွဈထှနျးစနေိုငျသညျ။
မဟူရာကြောကျကို ဝတျဆငျသောအခါ နားကပျ၊ ဆှဲကွိုး၊ လကျကောကျ၊ ရငျထိုးတို့အဖွဈ ဝတျဆငျက မညျသို့ ဝတျဆငျရမညျ ဟူသော ဥပဒသေမရှိ၊ နှဈသကျလို ဝတျဆငျနိုငျသညျ။ လကျစှပျအဖွဈ ဝတျဆငျက အမြိုးသားတို့သညျ လကျညှိုးတှငျသာ ဝတျရမညျ။ ဘယျ၊ ညာနှဈဖကျ နှဈသကျရာရှေး၍ ဝတျနိုငျသညျ။ အမြိုးသမီးမြားသညျ လကျသနျးတှငျသာ ဝတျရမညျ။ မဟူရာကြောကျကို အခွားသော ကြောကျမြားနှငျ့ စီခွယျ၍ ဝတျရနျ မသငျ့။ သီးသနျ့ ရှေးခယျြ ဝတျသငျ့သညျ။ မဟူရာကြောကျကို လကျစှပျအဖွဈ ဝတျဆငျက မိမိလကျသနျး၏ လကျသညျးခှံ ထကျကွီးသော အရှယျအစားကို ရှနှေငျ့ ကှငျး၍ ဝတျရမညျ။
အစိမျးရောငျ အဝတျအစားနှငျ့ တှဲဖကျဝတျဆငျက လာဘျလာဘ ရှငျပမြညျ။ ငှကွေေး ကံကောငျးမညျ၊ ဥစ်စာဓန တိုးပှားမညျ ဟုဆိုသညျ။
အညိုရောငျ အဝတျအစား နှငျ့ တှဲဖကျဝတျဆငျက လုပျသမြှ အလုံးစုံအောငျမွငျမညျ။ ထကျမွကျစှာအစှမျးပွနိုငျပွီး အလိုရှိရာ ပွညျ့စုံမညျ။
အပွာရောငျ အဝတျအထညျဝ တျဆငျက စနျးပှငျ့ခွငျး၊ ပီယဓာတျ ကောငျးခွငျး၊ လူခဈြလူခငျ ပေါမြားခွငျး၊ အေးခမျြးခွငျး၊ ပြျောရှငျခွငျးတို့ ရရှိစမေညျ။
အနီရောငျနှငျ့ တှဲဖကျဝတျဆငျက ပွောရေးဆိုရေးတို့တှငျ အမိနျ့ဩဇာ တညျမွဲခွငျး၊ ရနျအတိုကျ အခံတို့အား ဖကျရှား နိုငျခွငျးရှိမညျ။
အနကျရောငျ ဝတျဆငျက အမြားအပျေါ လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိမညျ။ ဆှဲဆောငျမှု အပွညျ့ရှိမညျဟု ဆိုသညျ။
ထို့ကွောငျ့ မဟူရာ ကြောကျကို ဝတျဆငျခွငျးဖွငျ့ သာမနျ အကြိုးဆကျကောငျး ရှိစခွေငျးအပွငျ မိမိဆငျ ယငျသော အဝတျအထညျမြား၏ အရောငျအသှေးအလိုကျ ထူးခွားသော စှမျးပကား မြားကိုပါ ရရှိနိုငျကွောငျး တငျပွအပျပါသညျ။
မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးအတှဲ ၈ နှငျ့
ဆရာစံ-ဇာဏီဘို၏ ကြောကျမကျြရတနာကို ဘယျလို ဆငျမွနျးမလဲ…. စာအုပျမှကောကျနုတျသညျ။
Previous post အသက်ကြီးသူများ နောင်တအရဆုံး အရာများ
Next post အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံး ၉ နိုင်ငံ